Ungawakopisha kanjani ama-worksheet amaningi ku-Excel eyodwa | Izindaba zeWindows
Ungawakopisha kanjani ama-worksheet amaningi ku-Excel eyodwa
I-Excel, ngokuzimela kwayo, i- Isicelo esihle kakhulu sokwenza amaspredishithi, kusuka kokulula njengokugcina umnotho wekhaya, kumashidi anedatha engafuneki, ebhekisa kwamanye amafayela kanye / noma amakhasi wewebhu, imininingwane ehlaziywa ngokuqhubekayo evumela ukuqhutshwa kwedatha okuqhubekayo nolwazi oluvuselelwe kuwo wonke umzuzu.
Ifayela ngalinye le-Excel lakhiwe ngamashidi nawo wonke amashidi akha ifayela le-Excel abizwa ngeBhuku. Lokhu kuyasivumela dala amashidi ahlukene kufayela / encwadini efanayo ukuba nabo bonke endaweni eyodwa. Ishidi ngalinye lingathola idatha ngokuzimela yize isakhiwo sinye.
Lokho wukuthi, singaba namashidi amaningana ncamashi ekwakhiweni kepha ngalinye lisikhombisa idatha ehlukile noma lithole ngokuzenzakalela idatha evela kweminye imithombo. Kepha ngalokhu, into yokuqala okufanele siyenze kopisha izikhathi eziningana ishidi elifanayo kufayela / encwadini efanayo.
Ukukopisha amaspredishithi amaningi encwadini efanayo, ukugcina ukwakheka nokwakheka, sinezinketho ezimbili:
1 Indlela ye-1
2 Indlela ye-2
Beka igundane ngaphezu kweshidi esifuna ukulikopisha bese ucindezela inkinobho yesokudla yegundane.
Bese ukhetha Hambisa noma kopisha.
Ebhokisini elilandelayo, sihlola ibhokisi Dala ikhophi bese sikhetha isikhundla esizoba naso eshidini, inketho yokudlulela ekugcineni kube inketho enconyiwe, ukuze ishidi elisha libekwe njengephepha lokugcina lencwadi.
Enye inketho esheshayo bese uqhafaza eshidini lencwadi esifuna ukulikopisha futhi cindezela inkinobho Yokulawula ngenkathi uhambisa igundane maqondana nendawo lapho sifuna ukwenza khona ikhophi leshidi okukhulunywa ngalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » I-Microsoft Office » Ungawakopisha kanjani ama-worksheet amaningi ku-Excel eyodwa
Ungahlola kanjani uma Windows 10 yenziwe yasebenza kunoma iyiphi ikhompyutha
Nakhu ukuthi ungarekhoda kanjani ucingo kumaMicrosoft Teams igxathu negxathu